Kismaayo News » Taarikhda Mawliidka iyo diintu waxay ka qabto‏
Taarikhda Mawliidka iyo diintu waxay ka qabto‏
Bismillah Raxmaani Raxiim:Waxaa laga yaabaa in dad badani ku wareeraan is jiid jiidka Mawlidka, qaarna leeyihiin waa bidco, qaarna leeyihiin mayee waa arin qof waliba oo muslim ah ay lagama maarmaan tahay inuu ku farxo dhalashadii rasuulka Muxammad sallallaahu calayhi wasallam, Balse walaallayaal aanu arinta si kale u eegno, annagoo isla fatashayna buugaagta taariikhda, kadiban aanu ku miisaamayno maanka iyo caqliga uu Allah swt. nagu manaysatay. Taariikh Ahaan Si baaritaankeenu uu u noqdo mid mira dhala waxaa haboon in aanu is weydiino su’aalahaan:-.
1-Nebi Muxammad Sallallaahu calayhi wasalam xaflad ma u dhigtay dhalashadiisii iyo anbiyadii ka horaysay ba’?
2-Saxaabadiisii sida: Abu Bakar, Cumar, Cusmaan iyo Cali iyo dadkii ku xigay ee wanaagsanaa sida: Abuu Xaniifa, Maalik, Shaafici iyo Axmed Ibnu Xanbal (aasaasayaashii afarta madaahib ee Fiqiga maanta caanka ah) ma u dhigeen geeridiisii kadib xaflad dhalasho?
3- Goorma ayay u bilaabatay dhigidda xaflada mawlidka.? Yaasa ugu horeeyay qof dhiga?.
4-Xaflad dhigiddu ma cibaadaa oo ajar miyaa laga helayaaa mase waa bidco oo waa lagu dambaabi amase cibaado iyo ajar midna toonna maahan??.
Jawaabaha: Jawaabta su’aasha koowaad: Culimada oo dhan (kuwa ogol mawlidka iyo kuwa diidan intaba) hadii aad su’aashaan waydiisid waxay kugu jawaabayaan MAYYA ma uusan dhigan
Jawaabta su’aasha labaad: Culimada oo dhan (kuwa ogol mawlidka iyo kuwa diidan intaba) hadii aad su’aashaan waydiisid waxay kugu jawaabayaan MAYYA ma aysan u dhigin.
Jawaabta su’aasha sadexaad: Culimada oo dhan (kuwa ogol mawlidka iyo kuwa diidan intaba) hadii aad su’aashaan waydiisid waxay kugu jawaabayan: qoladii ugu horaysay oo xaflada mawlidka dhigta waxay ahayd dawladii Cubaydiyyada (Faadimiyiintii).
Dawladaas waxay culimada ahlu sunnada dhamaantood (macaa kuwa mawliidka iskaga soo horjeeda) isku waafaqeen in ay gaalo diinta islaamka ka baxay ahaayeen, xaflada mawlidka keliya ma aysan qaban qaabin jirin balse waxay kaloo qaban qaabin jireen xaflado kale sida dhalashadii Cali Ibn Abi Daalib, Faaduma, Xassan, Xuseen (allaah haka wada raali noqdee) iyo dhalashada ninka markaa madaxda u ahaa.
Dawladaas xarunteedu waxay ahayd Qaahira ee dalka Masar, waxayna dowladaasu jirtey 910 -1171 miilaadi Jawaabta su’aasha afaraad: Su’aashaas oo ahayd: Xaflad dhigiddu ma cibaadaa oo ajar miyaa laga helayaaa mase waa bidco oo waa lagu dambaabi amase cibaado iyo ajar midna toonna maahan?? Waa meesha la isku haysto, bal si su’aalo iyo jawaabo ah aanu u dhiraan dhirinno.
Culimada dhamaantood (kuwa ogol mawlidka iyo kuwa diidan intaba) waxay isku waafaqsanyihiin in Mawlidku bidco yahay, balse qaarka ogoli waxay leeyihiin waa bidco wanaagsan meesha kuwa diidanna ay leeyihiin mayee waa bidco. Bidco walibana waa lagu dembe geli sida uu yiri Nebiga sallallaahu calayhi wasallam Bidco: Waxaa la dhahaa wax walba oo diinta lagu soo kordhiyo geeridii Rasuulka – sallallaahu calayhi wasallam – gadaasheed. Talo iyo Gunaanad: 1-Maadaama uusan Suubanuhu – sallallaahu calayhi wasallam – uusan samayn. 2-Maadaama aysan saxaabadii suubanaha aysan samayn 3-Maadaama aysan culimada waa waynayd ee dunida islaamka soo martay sida Abuu xaniifa Maalik Shaafici Axmed aysan samayn 4-Maadaama dadka xaflada mawlidka aasaasay ay ahaayeen kuwo culimada islaamka isku waafaqay in gaalo ahaayeen. Intaas kadib walaalayaal waxaa mudan in aanu is weydiino Su’ashaan: Mawlidka Ma U Dabaal Dagnaa Mise?? Ha noqoto su’aashaas mis caqligeena ka shaqaysiisa uuna qof walba kaga jawaabo si cadaaladi ay ku jirto.
A Warsame Hiraabey